Knowledge – Shinyoon
ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားမှတော့ နေနိုင်အောင် နေရတာပေါ့ မနေနိုင်လို့ပါဆိုပြီး တွယ်ကပ်နေလို့လဲ မဖြစ်တော့ဘူးလေ အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ အချိန်တွေ အများကြီးဖြုန်းခဲ့မိသလို နေရက်တွေအများကြီးမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပြီးတော့ နာကျင်စရာတွေ ဖြတ်သန်းရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပျော်အောင်မနေတတ်တော့တာ တစ်နေ့တစ်ရက်လဲ မဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ အရေးပါချင်ပါချင် သူက လဲ …
September 12, 2021 by Shin Yoon
ကော်ဖီကြိုက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး…. မနက်မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်ရင် ဘာစားရမလဲလို့ အရင်မတွေးဘူး ကော်ဖီသောက်ဖို့ပဲ အရင်တွေးတယ်… ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်မှ မသောက်ရရင် အဲ့ဒီနေ့ဟာ တစ်ခုခုလိုနေသလို…. တစ်စိုက်မတ်မတ်ကြိုက်တတ်ခဲ့တာလည်း ဒီတစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တာကိုး ။ ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ပြတင်းပေါက်နားလေးထိုင်ရင်း ကော်ဖီလေးအေးတဲ့အထိ ငေးနေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးပေါ့ ဘာတွေးနေလဲမေးရင် မသိဘူးလို့ပဲ …
September 5, 2021 by Shin Yoon
အမှတ်တရတွေက ကျွန်မကို သတ်နေတယ် ဒီအချိန်ဆို ကျွန်မနဲ့သူ စကားတွေအများကြီးပြောနေကျလေ … အကြောင်းပြချက်တွေ ရေရေရာရာမရှိလဲ အချိန်တွေ အကြာကြီး စကားတွေ ပြောနေကျဆိုတော့ ကျွန်မမှာ အမှတ်ရမိတယ် မတော်တဆများ ယောင်မှားပြီး ခေါ်လာလေမလားလို့ ပေါတောတောလေး မျှော်လင့်မိနေတုန်း ။ သူနဲ့ပတ်သက်ရင် …
September 4, 2021 by Shin Yoon
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ အချိန်အကြာကြီးဆွဲထားခဲ့တဲ့လက်လေး ဒီနေ့တော့ လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ သေသေချာချာတောင် မှာလိုက်သေးတယ် အဆင်ပြေအောင်နေလို့ တကယ်တမ်း သူ့ကို ပြောပြီး အဆင်ပြေအောင် မနေတတ်တာက ကိုယ်လေ သူက ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေစဉ်ကတည်း ကိုယ်မရှိလဲ အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီးသားပဲလေ တစ်ရက်လုံးစကားမပြောရလို့လဲ အပြုံးမပျက်ဘူး …
ကိုယ့်ဘက်က အတင်းလိုက်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ ကြိုးလေး နောက်ဆုံးတော့ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့ ။ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် The End ဆိုတဲ့စာတန်းလေး ထိုးသွားပြီးတဲ့အထိ သေချာသွားခဲ့ပြီလေ … ဘာရလိုက်သလဲတဲ့ … နာကျင်မှုတွေ ပြီးတော့ တန်ဖိုးထားမခံရခြင်းတွေ မချစ်ခြင်းတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ လူသားမှာ …
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲရင် သိပ်သိသာတယ် … မရီရတဲ့ ဟာသတွေကို အသံဗြဲကြီးနဲ့ရီပြီး ငိုစရာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေမှာတောင် သေလောက်အောင် ငိုတာလေ ပြီးရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးတည်းကိုပဲ အသွင်သွင်သုံးတယ် … တချိန်က သတိမရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဖုန်းဘေတွေ မနှောမြောတော့ပါပဲ …